आहा ! कति स्वादिलो मनाङको फापर – newsagro.com
High Value Main News Slider
आहा ! कति स्वादिलो मनाङको फापर
October 7, 2017 October 10, 2017 NewsAgro0Comments आहा ! कति स्वादिलो मनाङको फापर, फापर खेती, मनाङ, लमजुङ
लमजुङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा फापर खेती फस्टाउँदै गएको छ । धान, मकै र कोदो नफल्ने यहाँ फापर खेती राम्रो हुन थालेपछि किसानहरु हौसिएका छन् । फापरले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ । यहाँका सबै गाउँपालिकाका किसानले फापर खेती गरेका कृषि कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ सय २० हेक्टरमा फापर लगाएकोमा ५ सय ३६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो । कृषिका प्राविधिक सहायक महेश पाख्रिनका अनुसार, फापरको खेती र उत्पादन बढ्दो छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/ ०७० मा २ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फापर खेती गरिएकोमा ४ सय ९८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/ ०७१ मा २ सय ८५ हेक्टरमै खेती गरिएकोमा ५ सय १३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यसरी क्रमशः फापरको उत्पादन बढ्दै गएको पाख्रिनको भनाई छ । स्थानीयले एक वर्ष गहुँ रोप्ने र अर्को वर्ष फापर रोप्ने गरेका छन् ।
तल्लो मनाङभन्दा निस्याङ भ्यालीले चिनिएको माथिल्लो मनाङमा यसको खेती बढी हुने गरेको छ । स्थानीयले यसलाई पर्यटनसँग जोड्दै खेती गरिरहेको हुम्डेका किसान राजु गुरुङले बताए । ‘हामीले खेती गर्दै आएको फापर यहाँको रैथाने हो, अर्गानिक हो,’ उनले भने, ‘यहाँ आउने पर्यटकलाई खुवाउँछौं । उनीहरू विशेष रूपले मन पराउँछन् ।’ फापरको पीठोबाट तयार पारिएको ढिंडो र रोटी पोषिलो हुने स्थानीय बताउँछन् ।
कृषि कार्यालयका अनुसार, होटल व्यवसायीमा आवद्ध स्थानीयले प्रायः फापरको खेती गर्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण पदमार्ग भएकाले यहाँका धेरै जनाले होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसबेला माथिल्लो मनाङमा फापर फुलिसकेको छ । पर्यटकले फापरको परिकारमात्रै नभएर फापर खेतीलाई पनि मन पराउने गरेका छन् । पदमार्गमा आउने पर्यटक फापर खेती हेर्न लोभिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयले परम्परागत रूपमै यसको खेती गर्दै आएका छन् । कृषि कार्यालयका अनुसार, स्थानीयले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको फापर खेतीको अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । यहाँको फापर पुरानो रैथाने जातको हो । तराईमा तीते फापर र हिमालमा मिथे फापरको खेती हुने गर्छ । मनाङमा फापर खेतीले पर्यटक भित्र्याउन सहज बनाएको छ । यहाँको लोभलाग्दो फापर खेती हेर्न आन्तरिक र बाह्य पयर्टकहरू आउने गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति : असोज २२, २०७४
← नयाँ उपभोक्ता ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
कृषिमन्त्री भन्छन, ‘स्थानीय निकायमा गएको कृषि बजेट दुरुपयोग भयो’ →